ကျေးဇူးတင်ပါတယ်……. – PoemsCorner
In: ကဗျာ Posted By: အသဲကွဲမိုး Date: Dec 29, 2010
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသဲကွဲသူများနေ့ (International Brokenhearted Day) October 19 International Brokenhearted Day
Leave comment 17 Comments & 871 views
မိုးခါးရေလည်း မသောက်ပါနဲ့တော့ဗျာ ………. စိတ်တွေလည်း ဝေခွဲမရဖြစ်ပါနဲ့တော့ လိပ်ပြာ အကြဲံဥာဏ်ပေးမယ် ကုတင်ပေါ် ဖင်ကုန်းပြီး တ၀တပြဲသာ ငိုလိုက်ပါဗျာ….. ကိုယ်တွေ့မို့ပါ…. ကျွန်တော်လည်း ဒီနည်းအတိုင်း ဒီတောင်က ကျော်လာခဲ့တာပါဗျာ ……….
အသဲကွဲတောင်ကို မျက်ရည်မိုးတွေစွေပြီး လိပ်တို့၏လုံ့လတို့နဲ့ တက်ခဲ့ရတာပါဗျာ… တော်သေးလို့ အဆင်းက ကုန်းချောဖြစ်နေတော့ လိမ့်ကျတာ ကံကောင်းလို့ အသက်ပါ ပါမသွားတာ…………….
မိုက်တယ်ဗျာ…တောင်ကျော်တဲ့ပုံက…….ဒါနဲ့ လိပ်ပြာဆို???တောင်ပံ က ဘယ်နားရောက်လို့..လိပ်ဖြစ်တာတုန်း
လိပ် အပြာ လား???? 😛
လာနောက်နေသေးတယ် ………. တောင်ပံမဲ့လိပ်ပြာလို့ ရေးထားတာ မမြင်ဘူးလား . . ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မျက်စိမှုန်နေပြီလား …………. အတောင်မရှိလိပ်ပြာဆိုတာ ဆေးရောင်စုံတဲ့လူလို့ အဓိပါယ်ရတယ်ဟ . . . မသိရင်မေး မစင်ရင်ဆေးတဲ့ …. ဒီစကားပုံလေးပါ မှတ်ထားနော် …
အသဲကွဲမိုး ကောင်းလိုက်တာ ဗျာ…..
ထပ်တွေ့၇င် ကျေးဇူးတကယ်တင် လို့သွားပြောမှာလား အသဲကွဲမိုး
အတောင်မရှိ လိပ်ပြာဆိုတော့ ကိုယ်တုံးလုံးပေါ့ …(သြော်ငါ့နှယ် စာလုံးပေါင်းမှား၇တယ်လို့ )….ပိုးတုံးလုံးပေါ့။ ပိုးတုံးလုံးဖြစ်ဖြစ် လိပ်ပြာဖြစ်ဖြစ် သတိတော့ထား ဒီcorner မှာ လေကြီး မိုးကြီး ဆိုတာရှိတယ် ။
အသဲကွဲမိုး နဲ့ေ၇ာပြီး ကျနော်လဲ ကျေးဇူးတင်ချင်တာလေးရှိပါတယ် poemscorner ရဲ့ admin များအားလုံးကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဒီကွန်မန်က နေ တဆင့် ပြောချင်ပါတယ်။
ဟားး ကိုဒန်ကလည်း ညီအစ်ကို အချင်းချင်းလာခြိမ်းခြောက်နေသေးတယ် ………….. လေကြီးမိုးကြီး ရှိလဲ လိပ်ပြာ မကြောက်ပေါင် ကိုဒန်(ဒန်အိုး)နားကပ်နေမှာပေါ့ လေကြီးလည်း ကာလို့ရတယ် မိုးကြီးလည်း ကွယ်လို့ရတယ် ကောင်းဘူးလား …………… 😛
By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) at Dec 30, 2010
By: moehtetaung18 at Dec 30, 2010
အဲလိုပြောချင်တာငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါလား။ ညီမလေးဘယ်သူ့ကိုပြောမှာလဲ။ တိုးတိုးလေးမေးမယ်။ comment မှာပဲပြန်ဖြေ။ သူများတွေမသိစေနဲ့။ 🙂 🙂
By: moezat at Jun 7, 2012
By: moehtetaung18 at Jun 7, 2012
mike de,,ma moe yae,
By: ei lay at Jun 7, 2012
By: ei lay at Dec 29, 2012